Mogadishu Journal » DFS oo war ka soo saartay dagaalkii Kala-beyr guddina magacaabeysa
Mjournal :-Xukuumadda Soomaaliya ayaa saacado kadib ka hadashay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Kalabeyr ee Gobolka Hiiraan,kaas oo uu ku geeriyooday Taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan Gaashaanle Dhexe Maxamed Macow Xalane.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga Xukuumadda Soomaaliya Cabdinaasir Saciid Muuse ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay ka xun tahay dagaalkii ka dhacay duleedka Baladweyne isaga oo ka tacsiyadeeyay dilkii Taliyihii qeybta Booliska Gobolka Hiiraan.
Waxa uu sheegay Wasiir kuxigeenka in Dowladda Soomaaliya ay Guddi u Magacaabeyso Shaqaaqadaas,isla markaana baaritaan dhab ah ku sameynaya wixii sababay dagaalkii ka dhacay deegaanka Kalabeyr.
“Wasaaradda Amniga Gudaha waxaa magacaabeysaa guddi ka warbixiya waxa keenay Shaqaaqadii ka dhacday duleedka Baladweyne iyo cidii arrintaasi ku lug laheyd,waxana rajeynayaa in guddigaas markii la magacaabo in si dhaqsi ah uu u Shaqa bilaabi doono ayuu yiri Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Amniga”.
Mas’uuliyiinta Hay’adaha Amniga ee ka holwgalla deegaanada Hir-Shabeelle ayuu ugu baaqay inaysan ka qeyb gelin wax khalqal gelinaya amniga iyo wax dhibaato u keenaya Shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan.
Dagaalkii shalay ka dhacay duleedka Magalada Bladweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa la sheegay in uu salka ku haayo xilka qaadistii Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) balse uu diiday.
Khayre oo Qatar Uga Qayb Galay Furitaanka Madasha Dooxa by Ahmed Ali - Sat Dec 14th 9:51:33
Ammaanka madaxtooyada Soomaaliya iyo hareeraheeda oo la adkeeyay by Ahmed Ali - Sat Dec 14th 9:28:30
Guddiga Madaxa-bannaan ee doorashooyinka oo Golaha Shacabka hortagaya by Ahmed Ali - Sat Dec 14th 5:42:56
Xulka Qaranka Soomaaliya oo Garaacay Dhigooda Burundi by Ahmed Ali - Fri Dec 13th 15:47:05
Jubbaland oo xilalkii ka qaaday Guddoomiyeyaasha degmooyin ka tirsan Gedo by Ahmed Ali - Fri Dec 13th 15:43:56